မြန်မာဆေးနည်း – XB Media Myanmar
မျက်မှန်ပါဝါရှိသူ၊ အာရုံကြောအား နည်းသူ၊ ဆီချို ၊ သွေးချို သမားများ အတွက် အောင်မဲညို ( ကိုယ်တွေ့ မျှဝေခြင်းပါ )
March 15, 2020 Bestie_Author
အောင်မဲညို….( ကိုယ်တွေ့ မျှဝေခြင်းပါ ) အောင်မဲညိုပန်း (အခြောက်)သောက်လာတာ ၃လ လောက်နေတော့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာ တွေ့တွေ့ နေရတဲ့ တိမ်လိုလို ငှက်မွှေးလိုလိုလေး ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်…မျက်စိဆရာဝန် ကသောက်ခိုင်းတဲ့ဆေး ၆ လ ၂ကြိမ်သောက်တာတောင် မပျောက်ခဲ့ပါ.လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက် ကဆေးသောက်တာပါ..ခွဲရမှာကြောက်ပြီး ဆေးခန်းပြန်မပြမိတော့ဘူ..ဆေးသောက်လို့ မပျော က်ရင်တော့ ခွဲရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်…ခုတော့ ခွဲစရာမလို အိုကေပြီလေ…( လဘက်ခြောက်နဲ့ ရောပြီး နေ့စဉ် သောက်ပါ) အောင်မဲညို ဆိုတာ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အပြာရောင် ပန်းပွင့်လေး။ ဒီ အောင်မဲညိုပန်းခြောက်လေး ၄/ ၅ ပွင့်ကို ရေနွေးကြမ်းထဲ ခပ်သောက်ပြီး ၂လ , ၃လ အကြာမှာ မျက်မှန်ပါဝါရှိသူတွေ မျက်မှန်ကျွတ်ပြီး စာတွေဖတ်နိုင်လာတယ်။ မွဲခြောက်ခြောက်အသားအရေကနေ စိုပြည်ဝင်းလက်လာသူတွေ။ အာရုံကြောအားနည်းသူတွေ၊ မျက်ရိုးခဏခဏ ကိုက်သူတွေ။ ဆံပင်ဖြူ တွေ ပြန်နက်လာသူတွေ။ ဆီချို ၊ သွေးချို သမားများ ရောဂါ သက်သာလာတာတွေတွေ့ရတော့။ ဒီ အောင်မဲညိုပန်းလေးအကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြချင်လာပါတယ်။ မြန်မာလို အခေါ် အောင်မဲညို ပန်း ကို အင်္ဂလိပ်လို Butterfly Pea Flower လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရာစုနှစ်တော်တော်များတည်းက…
ပနျးနာရငျကပျြ၊ ဗိုကျအောငျ့၊ နား ကိုကျ၊ ‌‌ခေါငျးကိုကျ၊ သှေးတိုးနှငျ့ ရှမျးနံနံ
ရှမ်းနံနံ ပန်းနာ ရင်ကျပ် ဗိုက်အောင့်ခြင်းနှင့် နားကိုက်ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းစေသည်။ ရှမ်းနံနံကြို မန် မာနို င်ငံ အနှံအပြား ဒေသအမျိုးမျိုးရဲ့ အစားအစာ ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင် အဖြစ်အသုံးပြု ကသည်။ အခြားတိုင်းပြည်များ မက္ကဆီကို၊ တောင်အမေရိက၊ ကာရေဘီးယား၊ လက်တင်အေ မရိကတို့မှာပါ အသုံးများကြောင်း သိရတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ မြန်မာ၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တို့မှာလည်း ဆေးအ သုံြး ပုကြတယ်။ သူတိုဆီမှာ- ပန်းနာရင်ကျပ်‌၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ နားကိုက်ဝေဒနာ၊ အစာချေစနစ် ပြဿနာ ( သန်ထခြင်း၊ဝမ်းပျက်ခြင်း ) မြွေ ( သို့ )အင်းဆက် အကိုက်ခံရတာ အဖျားတက်တာ ငှက်ဖျား ရောဂါတို့အတွက် ကုသနည်းအဖြစ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြတယ်။ အရွက်ရော အမြစ် မှာပါ အဟာရဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိများ ပါ ဝင် ပါတယ်။ ရှမ်းနံနံမှာ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင်အေ , စီ, ဗီတာမင် ဘီဝမ်း ဘီတူး၊ ကာဗိုဟိုက်ဒ ရိတ် ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ခံတွင်းပျက်နေသူတွေအတွက် အစားချင်စိတ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ သွေးတိုးကျစေတယ်။ တုတ်ေ ကွးဖြစ်တဲ့အခါ သက်သာစေတယ်။…
အိပ်မရအောင် ဆိုးနေတဲ့ချောင်း ချက်ခြင်း လစ်သွားမယ်
March 7, 2020 Bestie_Author
အိပ်မရအောင်ဆိုးနေတဲ့ချောင်း ကြက်သွန်နီနဲ့ ချောင်းဆိုး ပျောက်ခြင်းကို ကုသတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..အသုံးပြုပုံလေးကတေြာ့ ကက်သွန်နီခြောက်လုံး လောက်ကို ပါးပါးလေး လှီးလိုက်ပါ….. ၎င်းကို ပျားရည်ခွက်ဝက်နှင့် ရောစပ်ကာ ဆူပွက် နေတဲ့ အိုးအပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ လက်ကိုင် ပါ ဒယ်အိုးဖြင့် ထည့်လိုက်ပါ…… အဖုံးအုပ်ပြီး ရေနွေး ငွေ့နှင့် ၂ နာရီကြာ အပူ ပေးလိုက်ပါ……အရည်များကို စစ်လိုက်ပြီး လုံခြုံစေမယ့် ဗူးနဲ့ထည့်ထား လိုက်ပါ….. ထိုအရည်များကို ၂ နာရီ ၃ နာရီကြား တစ်ချိန် သောက်ပေးပါက ရောဂါပျောက် ကင်းစေမြှာ ဖစ်ပါတယ်…..။ ဆေးကြိတ်တဲ့ဇော်ဂျီ [Unicode] ကွကျသှနျနီနဲ့ ခြောငျးဆိုး ပြောကျခွငျးကို ကုသတာပဲ ဖွဈပါတယျ…..အသုံးပွုပုံလေးကတေွာ့ ကကျသှနျနီခွောကျလုံး လောကျကို ပါးပါးလေး လှီးလိုကျပါ….. ၎င်းငျးကို ပြားရညျခှကျဝကျနှငျ့ ရောစပျကာ ဆူပှကျ နတေဲ့ အိုးအပျေါမှာ တငျထားတဲ့ လကျကိုငျ ပါ ဒယျအိုးဖွငျ့ ထညျ့လိုကျပါ…… အဖုံးအုပျပွီး ရနှေေး ငှနှေ့ငျ့ ၂ နာရီကွာ အပူ ပေးလိုကျပါ……အရညျမြားကို စဈလိုကျပွီး လုံခွုံစမေယျ့ ဗူးနဲ့ထညျ့ထား လိုကျပါ….. ထိုအရညျမြားကို ၂ နာရီ ၃ နာရီကွား…
မြွေနှင့် အဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုနိုင်သည့် ကြောင်လျှာရွက်၏ အသုံးပြုပုံများ( အများသိေ အာင်ရှယ်ပေးကြပါဦးရှ
March 4, 2020 Bestie_Author
ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae)။ ဥုံ မြန်မာ့တိုင်ရင်းဆေးပညာ အသစ် တဖန် ပြန်လည် ထွန်းကားပါစေသော်။ ကြောင်လေးပင် မြွေနှင့် အဆိပ်မျိုးမျိုး နိုင်နင်းသော ဆေး ဖော်စပ်ရာ၌ အသုံးပြု ကြောင် တစ်ကောင် ခေါ်သည့် ကြောင်လျှာရွက် (က) ကြောင်လျှာအခေါက်အမှုန့်ပြု ၍ ချင်း(ဂျင်း)ရည် ၊ ပျားရည်တို့နှင့် ရောစပ်လျက် သောက်ေ သာ် ပန်းနာ ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်၏ (ခ) အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် ၂ နာရီခန့်စိမ်၍ စစ်ပြီး နံနက် ည သောက်သော် အစာမကြေေ ရာဂါ ပျောက်၏ (ဂ) ကြောင်လျှာခေါက် ကို ရေစိမ်၍ ၎င်းရေနှင့် ပလုတ်ကျင်း ပေးသော် ခံတွင်း ခြောက် ကွဲနာ ပျောက်ပါတယ် (ဃ) သားဖွားပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲသည့်ရောဂါ ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ရောဂါများအတွက်လည်း ကြောင်လျှာခေါက်ကို သုံးနိုင်သေးသည်။ (င) အမြစ်ခေါက်ကို အဆစ်အမျက်ရောဂါဖျားရောဂါ ၊ ဝမ်းဖော ၊ ဝမ်းရောင်…
ကွကျသှနျဖွူကို တဈနတေ့ဈမှာ စားပေးခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမညျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြား
March 1, 2020 Bestie_Author
ကွကျသှနျဖွူက လူမြိုးတျောတျောမြားမြားရဲ့ တိုငျးရငျးဆေးတှမှော အဓိက ပါဝငျပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ရာစုနှဈ ပေါငျးမြားစှာ ကတညျးက ဟငျးလြာတှေ အရသာရှိဖို့ နိုငျငံတျောတျော မြားမြားမှာ အသုံးပွုကွပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူမှာ ဆာလဖာ ကှနျပေါငျးနဲ့ Phytonutrients ဓာတျတှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ ဖြားနာတှေ ပြောကျအောငျ ကုတဲ့နရောမှာ ထညျ့သုံး ခဲ့ကွဖူးပါတယျ။ကွကျသှနျဖွူ တဈမှာ ကို နစေ့ဉျစားရငျ အစာခွစေနဈကို အားကောငျးစပွေီး အာဟာရ တှကေိုလညျး အမြားကွီး ရရှိနိုငျပါတယျ။ သှေးလညျပတျမှုကို မွှငျ့တငျပေး ကွကျသှနျဖွူမှာ ဗီတာမငျ B ဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ Homocysteine ကို လြော့ နညျး စပေါတယျ။ Homocysteine ဓာတျက သှေးကွောတှကေို ကဉျြးစပွေီး၊ သှေးကွောတှေ ပါးလာပွီး ထုံးလာတတျပါတယျ။ သဘာဝ ပိုးသတျဆေး (Antibiotic) ဒုတိယကမ်ဘာစဈတုနျးက ဆေးဝါးတှေ ပွတျလတျတုနျးကဆိုရငျ ကွကျသှနျဖွူကို ပိုးသတျ ဆေးအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ကွကျသှနျဖွူက အစှမျးထကျတဲ့ သဘာ ၀ ပိုးသတျဆေး တဈမြိုး ဖွဈတာကွောငျ့ နစေ့ဉျ ကွကျသှနျဖွူ တဈမှာစားရငျ ကိုယျခံအားစနဈကို ကောငျး မှနျစပေါတယျ။ တုပျကှေး၊ ဖြားနာခွငျးနဲ့ ရောဂါပိုးမှားဝငျခွငျးကို ကုသပေးပါတယျ။ အနာကို မွနျမွနျကြ…
ကငျ ဆာ ဆဲလျ ၉၈% ရာခိုငျနှုနျး သစေနေိုငျတယျ ဆို လဲ မမှား တဲ့ ကွကျဟငျးခါးသီး
ကြက် ဟင်းခါးသီး ပင်လေးဟာ အာရှတိုက်မှာဆိုရင် သာမန်အပင်လေး တစ်ပင်လောက်ပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝစ်ကီနာဝါက နှစ်ပေါင်းကြာရှည်အသက်ရှင်တဲ့ လူဦးရေတွေကြား အတော်လေး လူသိများပါတယ် ရေပါဝင်မှု ပမာဏ (၅%) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးရည်က အစာကြေမှုအတွက် အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေရဲ့ လမ်းကြောင်းလေးခုကို ဖျက်ဆီးပေးပါတယ် ကြက်ဟင်းခါးသီးကကင်ဆာဆဲလ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ၉၀% ရာခိုင်နှုန်းေ လျာ့ချပေးပြီး တခြားလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုလည်း မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ၉၈%ရာခို င်နှု န်းအထိ ဖျက်ဆီးပေးပါတယ်။ ဒီကုသနည်းက ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ အချက်က ကြက်ဟင်းခါးသီးက ကင်ဆာဆဲလ်တွေရဲ့ ကလိုး ကို့စ် အစာချေဖျက်မှုစနစ်ကို ရပ်တန့်စေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း ပြန်လည်အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ နောက်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင် ဆဲလ်တွေအတွက် ဆက် လက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သိကြားဓာတ်ရရှိမှုကို ရပ်တန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကျိုး သက်ရောက်မှု အတိုင်းအတာဟာ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ကုသတဲ့ တခြားဓာတုဆေးများထက် များစွာထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ [Zawgyi]ျကက် ဟင်းခါးသီး ပင်လေးဟာ အာရွတိုက္မွာဆိုရင် သာမန်အပင်လေး တစ္ပင်လောက္ပါပဲ။ ဂ်ပန်နိုင်ငံ ဝစ္ကီနာဝါက နွစ်ပေါင်းကြာရွည်အသက်ရွင္တဲ့ လူဦးရေတြကြား အေတ်ာလေး လူသိ မ်ားပါတယ် ရေပါဝင္မှု ပမာဏ…
ဝမျးခြုပျသူမြားအတှကျ အကွောပွေ ဝမျးမှနျစသေညျ့ ကရှတျခှေ
ဝမ်းချုပ်သူများအတွက် အကြောပြေ၊ ခါးနာပြေ၍ ဝမ်းမှန်စေသည့် ကရွတ်ခွေ ထမင်းစားတဲ့အခါမှာ ထမင်းတစ်လုပ်​၊ရေတစ်မှုတ်သောက်တတ်သူတွေ၊ ထမင်းစားပြီးတဲ့ အခါရေကို ဗိုက်တင်းအောင် သောက်တတ်သူတွေဟာ သွေးပြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ စမြင်းခြံ ခင်းနဲ့ ကိုယ်လက်တောင့်တင်းခြင်း မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်အောင် ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း စတာေ တွ ခံစားရလေ့ရှိတတ်ပါ တယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါ နှစ်ရှည်လများ ​ရေအေးသောက်လာတဲ့သူတွေ အတွက် အထက်ပါဝေဒနာေ တွ ကင်းဝေးစေဖို့ တစ်လတန်သည် နှစ်လတန်သည် ဝမ်းကိုပြန်ကျင့် ပေးရပါတယ် 1။ ထမင်းစားနေဆဲနဲ့ စားပြီးပြီးခြင်း​ ရေအေး/ရေခဲရည်လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ 2။ ရေနွေး အနည်းငယ်နဲ့ဟင်းချို တဝသောက်လို့ရပါတယ်။ 3။ စားပြီးပြီးခြင်း ထန်းလျက်အညိုတစ်ခဲ စားပေးပါ။ 4။ ရေကိုနာရီဝက်ကျော်မှသာ နည်းနည်းခြင်း သောက်ပါ။ 5။ ထမင်းစားပြီး တစ်နာရီကျော်သွားရင်တော့သောက် လို့ရပါပြီ။ ရေခဲရည်ကိုတော့ လုံးဝမေ သာက်ပါနဲ့။ အခုပြောတာက ဝမ်းမချုပ်၊​သွေးမပြစ်ရအောင်အလေ့ အကျင့်ပြုလုပ်ရမယ့်နည်းပါ။ အခုပေးမယ့်နည်းက ဝမ်းချုပ်လွန်းသူများ လုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းပါ 1။ နံနက်စောစောအိပ်ရာထမှာ ရေလည်းမသောက်ရသေးမီ၊ ဘာမှမစားရသေးမီ ပုဆိုးတစ် ထည်ကို ကရွတ်ခွေပြု လုပ်ပြီး၊ ဝမ်းလျားမှောက် အနေအထားနဲ့ ချက်အောက်မှာထားပါ။ 2။ အသက်ကို တစ်ဝရှူပြီး လေကိုဖြေးညှင်းစွာ ပြန်ထုတ်ခြင်းနဲ့အတူ ချက်ကို…
“ငွေတစ်ထောင်လောက်နဲ့ကျောက် ကပ်ဆေးရအောင်
February 24, 2020 Bestie_Author
နှစ်တွေကြာအောင် ကျောက်ကပ်ဟာ သွေးကို ဆား အဆိပ်နဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်လာတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားစစ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေ ဆားတွေ ကျောက်ကပ်မှာ စုပုံလာတော့ ဆေးကြောသန့် စင်ဖို့ လိုပြီင်္ပေါ့။ဒါ့အပြင် ရောဂါတစ် မျိုးမျိုး ( အသည်းရောဂါ ) ရှိနေရင်လည်း ကျောက်ကပ်ဟာပိုပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ခုခေတ်မှာ သုံးရတဲ့ဆေးတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ဓါတုဓါတ်ကြွင်းတွေ အသားငါးက အာဆင်းနစ်တွေ ဟာ သင့်ကျောက်ကပ်ကိုခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ??? ကျောက်ကပ်ဆေးဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့…အရွက်စားမုန်လာပင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နံနံပင် (တရုတ်နံနံ) တစ်စည်းကိုယူရေနဲ့ သန့် စင်အောင်ဆေးအသေးလေးတွေဖြတ် ဆူနေတဲ့ရေထဲ ၁၀ မိနစ်ပြုတ် ဖန်ခွက်ထဲစစ်ထည့် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်အအေးခံ။နေ့ စဉ် တစ်ဖန်ခွက်ေ သာက်ပေးရင် စုပုံနေတဲ့အဆိပ်တွေ ဆီးထဲပါသွားပြီပေါ့။နံနံပင်ဟာ ကျောက်ကပ်ကု သဆေး အဖြစ် အများသိတဲ့ သဘာဝအပင်တစ်ခုပါဘဲ။ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ Credit to MTHN( UNIM ) Unicode နှဈတှကွောအောငျ ကြောကျကပျဟာ သှေးကို ဆား အဆိပျနဲ့မလိုလားအပျတဲ့ခန်ဓာကိုယျ ထဲဝငျလာတဲ့အရာတှကေိုဖယျရှားစဈထုတျပေးခဲ့ရတယျ။ဒီအခြိနျမှာ မလိုလားအပျတဲ့ အရာတှေ ဆားတှေ ကြောကျကပျမှာ စုပုံလာတော့ ဆေးကွောသနျ့စငျဖို့လိုပွီင်္ပေါ့။ဒါ့အပွငျ ရောဂါတဈမြိုးမြိုး ( အသညျးရောဂါ ) ရှိနရေငျလညျး ကြောကျကပျဟာပိုပကျြစီးလှယျ ပါတ ယျ ။ခုခတျေမှာ သုံးရတဲ့ဆေးတှေ…
အာရုံကြောအားနည်းမှုအတွက် မြန် မာ့ဆေးနည်းလေးပါ (ဇီဝိတဒါနအဖြစ် မျှဝေးပေးလိုက်ပါအုံးရှင်..)
February 20, 2020 Bestie_Author
ကျွန်တော် အာရုံကြော အားနည်း ခေါင်းချွေး တအားထွက် ဝမ်းချုပ် မူးဝေ တာတွေတော့ အခု ဘာဆေးမှ သောက်စရာ မ လိုလောက်အောင် ဒီပျားသံ ပ ရာ ကို လုပ် စားကြည့် လာ တာ အတော်လေး အဆင်ပြေ သွားပါပြီ ။ ခေါင်းချွေးများ ထွက် လာပြီ ဆို ဘာ မှ မ လုပ် ချင် လောက်အောင် စိတ် ပျက် မိ တာ ။ ပျားရ ည်တော့ စစ်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ် ။ အ ရမ်းကောင်း တယ် မနက်အိပ်ယာ ထထချင်း ပျားသံပရာ စားလိုက်တယ် မုန့်ဟင်းငါး ငံပြာရည်ချက် ငပိရည် အခု အကုန်စားတာ သွေးတိုး မရှိတာ့ဘူး ။ တအားတော့ မစားနဲ့ပေါ့ နော် မျှဝေပေးပါ လက်တွေ့ကောင်းတယ် ။ အာရုံကြော အ တွက် ဆေး ကု ထား တာ ချေ လက်တွေ ထုံ ကြင် တာတွေ…
ရုတ်တရက် လေဖြတ်လျှင် ချက်ချင်း အကောင်းပကတိ ဖြစ်အောင် အလျင် အမြန် ပြုစုကုသနည်း
သမားတော်ကြီး ဣစ္ဆာသယ ဦးမောင်မောင်၏ နည်း ပြုစု ကုသ နည်းမှာ သမားတော်ကြီး ဣစ္ဆာသယ ဦးမောင်မောင်၏ နည်း ဖြစ်ပါသည်။ နက္ခတ္တေ ရာင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဆောင်းပါးရှင် မြင့်မြတ်ထွန်း က စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးသား ထားပြီး မကြာမီကပင် လေဖြတ်သလို ဖြစ်၍ ပါးရွဲ့ခြေလက် လှုပ်မရသူ မိတ်ဆွေတစ်ဦးအား သမားေ တာ် ကြီး ညွန်ပြပါ နှိပ်ကွက် နေရာလေးများအား နှိပ်ပေးပါရန် အကြံပေးလေရာ (၃) ရက် အကြာတွင် အကောင်းပကတိ ဖြစ် ခဲ့ သည်မို့ အဖြစ်များလှသော လေဖြတ် လေဖြန်း ရောဂါများ ကြုံခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါရန် ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်ပါ သည်။ လေရောဂါသည် အသက် (၄၀) နှင့် (၆၀) ကြား အဖြစ်များပါသည်။ အအေးများရာက လေအ ထ က် သို့ ဆောင့်တက်၍ လေဖြတ်ပြီး ပါးရွဲ့၊ ခြေထောက်ဆာ၊ ခြေလက်တို့ လှုပ်မရအောင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရုတ်တရက် လေမိသူကို ယခု တင်ပြမည့် နှိပ်ကွက်လေးများဖြင့် နှိပ်ပေးပါမည် ဆိုလျှင် ပျောက် ကင်း…